Ripple စျေး - အွန်လိုင်း XRP ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Ripple (XRP)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Ripple (XRP) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Ripple ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $10 508 100 674.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Ripple တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Ripple များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
RippleXRP သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.936RippleXRP သို့ ယူရိုEUR€0.778RippleXRP သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.673RippleXRP သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.858RippleXRP သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr7.79RippleXRP သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.5.78RippleXRP သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč20.11RippleXRP သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł3.54RippleXRP သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.17RippleXRP သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.21RippleXRP သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$18.68RippleXRP သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$7.27RippleXRP သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$5.21RippleXRP သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹70.19RippleXRP သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.143.5RippleXRP သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.24RippleXRP သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.3RippleXRP သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿29.34RippleXRP သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥6.08RippleXRP သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥101.19RippleXRP သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1046.72RippleXRP သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦356.98RippleXRP သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽71.36RippleXRP သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴26.23
RippleXRP သို့ BitcoinBTC0.00002 RippleXRP သို့ EthereumETH0.000466 RippleXRP သို့ LitecoinLTC0.0042 RippleXRP သို့ DigitalCashDASH0.00361 RippleXRP သို့ MoneroXMR0.00355 RippleXRP သို့ NxtNXT15.37 RippleXRP သို့ Ethereum ClassicETC0.0486 RippleXRP သို့ DogecoinDOGE15.57 RippleXRP သို့ ZCashZEC0.00541 RippleXRP သို့ BitsharesBTS8.14 RippleXRP သို့ DigiByteDGB11.7
RippleXRP သို့ BitcoinDarkBTCD3096709.12 RippleXRP သို့ PeerCoinPPC0.959 RippleXRP သို့ CraigsCoinCRAIG40942243248.57 RippleXRP သို့ BitstakeXBS0.377 RippleXRP သို့ PayCoinXPY374.53 RippleXRP သို့ ProsperCoinPRC93632958.8 RippleXRP သို့ YbCoinYBC0.00052 RippleXRP သို့ DarkKushDANK28811208211.96 RippleXRP သို့ GiveCoinGIVE194475655430.71 RippleXRP သို့ KoboCoinKOBO72.12 RippleXRP သို့ DarkTokenDT0.862 RippleXRP သို့ CETUS CoinCETI12965043695.38
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 22 Apr 2021 10:45:02 +0000.